U-2 Spy sano 3 3 bilood ka hor #401
Gentelmen ,, Weligaa yaaban tahay?
Maya, halkan waa sida ay u eg tahay!
U-2 Diyaarad Lagu Heli Karo Diyaarad Lagu Saarayo Edge!
Saldhig Diyaaradeed ee Beale, oo ku yaal California,
waxay u socotaa U-2. Duulimaadyadan ayaa markii hore loogu talagalay in duulimaadyada sirdoonka sare, kormeerka iyo goobaha lagu baaro lagu arko intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa si loo soo ururiyo sirdoonka. Maanta, U-2S waxay u egtahay in ay taageerto howlgallo kala duwan oo ka yimaada dagaalka ka dhanka ah musiibada.
U-2S waa hal-kursi, hal baabuur, hal-sare iyo meel u dhow sahaminta iyo diyaaradaha la socoshada oo bixiya calaamado, muuqaal, iyo cabir elektaroonik ah iyo sirta saxeexa, ama MASINT.
Si caadi ah loogu duuliyo xagasha 70,000, U-2 waa in uu xirtaa gebi ahaan cadaadis buuxda oo la mid ah kuwa ay ku xiran yihiin astronauts. Tilmaamaha hoose ee dhererka sare ee diyaaradaha iyo baaskiilada nooca cirifka gawaarida ah waxay u baahan yihiin wax-qabadyo caddaynaya caddayn ah inta lagu jiro xilliga soo degitaanka; Aragtida hore ayaa sidoo kale xaddidan tahay sanku oo ah siyaabaha diyaaradaha ee dheeraadka ah iyo qaabka "qashinka". Tijaabada labaad ee U-2 tijaabada ah ayaa "caadi ahaan" ku "daba socota" mid kasta oo ka soo degaya baabuur farsamo oo sareeya, oo gacan ka geysanaya tijaabiyaha iyada oo la siinayo raadiyaha raadinta dhererka iyo wadada tooska ah. Tilmaamahani wuxuu isku daraa si uu u kasbado U-2 si weyn loo aqbalo sida diyaaradaha ugu adag adduunka si ay u duulaan.
Iyadoo ay socdaan hawlgallada, duuliyeyaasha U-2 badanaa waxay arkayaan dhacdo dabiiciga ah oo la yiraahdo line terminator. Waa xariiq ka dhexaysa maalin iyo habeenba. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "khadka cagaaran" iyo "gaabnida". Waa xadhig khafiif ah sababtoo ah cimiladeena qorraxda qorraxda. Xaqiiqadan "ha ha" waa xasuusin qurux badan oo ah sida yar oo aan nahay markaad isku dhajisid darajada bannaanka.
U-2 Diyaarad Sare Qorshe Diyaarad + Diyaarin iyo Duulin
Diyaarad Maraykanku leeyahay oo u duulaya diyaarad u shaqeyneysa U-2 Dragon Lady intii lagu guda jiray hawlgal baaritaan oo lagu ogaanayo meel aan la garanayn oo ku taala Koonfurta Aasiya. Fiidiyowga waxaa ka mid ah: Diyaargarowga hore ee diyaarinta; shaqaale iyo diyaarad ku socda wadada; gawaarida inta lagu jiro duulimaadka; kicinta iyo degitaanka; ka fiirsashada baabuurka qaska.